GRC Sandblasting effect-GRC Sandblasting effect-Nanjing BeiLiDa New Materials System Engineering Co., Ltd.
Omenala GRC dị elu
Ogwe nchekwa resin GRC na-ere ahịa
Panel nke usoro
Ntinye Art TCP
Prefabricated envelopu obubọk
Ọdụ Ahịa China
Mkpesa nke Eserese
Mmetụta GRb Sandb ebighị ebi
Ị nọ ebe a : >lọ>Product>Omenala GRC dị elu>Mmetụta GRb Sandb ebighị ebi
Ebe nke Si Malite: Nanjing, Jiangsu, China
Ika aha: Beildia
Model Number: Sandbilite GRC
A na-akpọkwa GRC (Glass Fiber Re Informed Concrete). Aha China bụ iko fiber glass solid. Ọ bụ ihe mejupụtara nke na-eji simenti ciment dị ka ihe a na-ahụ anya na akwara na-egbochi alkali dị ka ihe na-ewusi ike. N'otu oge ahụ, ọ tinyekwara ihe mgbakwunye dị iche iche maka ịkwalite arụmọrụ, ụcha, wdg. Usoro mmepụta GRC bụ ihe pụrụ iche. A na-etinye ihe dị n'ime iko fiber a kwadebere na tebụl ahụ na ezigbo ederede, nke nwere ike hụ na ngwaahịa ahụ iji nweta compactness kachasị mma, ike na nguzogide mgbape. Thusdị otu esi emepụta si dị iche na nke a na - ahụ anya. Na Europe na America, a na-ejikarị mpempe akwụkwọ GFRC eme ihe dị ka bọọdụ mpụga nke mpụga.
Ihe ngosi ịrụ ọrụ:
Performance Ihe ngosi chọrọ
Na-echi oke ike zuru oke / MPa Nkezi uru 7
Single ngọngọ kacha nta 6.2
Ultimate bending ike / MPa Nkezi uru 18
Single ngọngọ kacha nta 15
Ike mmetụta / kJ / M2 8
Ogologo olu (akọrọ) / g / cm3 1.8
Mmiri mmiri 14
Nchịkwa na-enweghị atụ Mgbe ihe omimi 25 mebiri emebi, enweghị mbibi, itufu ihe na ihe mmebi ndị ọzọ.
1. plasticity dị elu. Jiri teknụzụ ịme ngosi atọ nke dijitalụ okpukpu atọ n'ụzọ zuru oke, ka ngwaahịa a wee nwee ike idozi ụdị ịme ahụ n'ụzọ ziri ezi, n'otu oge ahụ wee gosipụta njiri mara ụlọ na njiri mara ụdị ọ bụla na agba ọ bụla.
2. Magburu onwe elu arụmọrụ nchebe arụmọrụ. Site na iji usoro nchebe zuru oke, a na-ahụ maka mgbochi idozi ya na nhicha onwe ya ebe ọrụ mkpuchi mmiri nke ngwaahịa ahụ na-adịwanye mkpa, yana ọnụnọ nke njiri mara mma ụlọ ahụ.
3. Egosi oke nke ukwu. A na-eji eriri PVA na-agbanwe agbanwe dị ka ihe mgbakwunye maka ihe owuwu GRC, PP fiber na-enyere aka melite microcracking na-eguzogide ala elu, si otú a na-eme ka ike ngwa ngwa nke ngwaahịa dịkwuo ma na-agbatịkwu oge ọrụ nke ụlọ.
4. Ìhè dị nro. Ihe omumu ohuru nwere ike imaputa njirimara nke nnukwu efere na mgbidi dị mkpa, na-ebelata ibu nke ụlọ, na-eme ka ngwa ahịa tinye n'ọrụ na mpụga nke ụlọ ndị dị elu, na-eme ka ihe owuwu na-agbanwe ma nwee nnukwu ederede n'ozuzu ya.
5. Nchekwa ike na mbelata ikuku: ma e jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ mechiri, GRC na-eri obere ume na usoro nke nrụpụta na ntinye. Ndị ọkà mmụta Japan emeela ntụnyere ikuku carbon carbon dị n’agbata mgbidi akwụkwọ ndụ GRC na mgbidi mgbidi siri ike, na iji ihe ogwe ihe GRC nwere ike belata uzu ikuku carbon site na 30%.
Nkume iitationomi GRC
Ogwe njikọ chiri nke Prefabricated